Ndị Amazon na-ere ọkụ, ngụgụ nke ụwa na-ere ọkụ! : Martin Vrijland
Ndị Amazon na-ere ọkụ, ngụgụ nke ụwa na-ere ọkụ!
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 23 August 2019	• 8 Comments
isi mmalite: abc.net.au
Onye ọ bụla chetara na mgbe onye isi ala Brazil ugbu a, Jair Bolsonaro, bịara n'ọchịchị dịka a na-egosipụta ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị oke egwu dị oke egwu na mgbasa ozi, mara ozugbo na anyị na-emekọ ihe ebe a na onye na-akwado ebumnuche mgbochi ụwa. . Otu onye na-akwado ọdịmma nke ndị nke ya. Kinddị Boris Johnson, Thierry Baudet, Donald Trump na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ ọzọ nwere ikike nwere ike ịnwe obere otuto ma ha ga-akụrịrị afọ n'ala, n'ihi na nke a bụ nnukwu burukwa. Ihe niile na onye ọ bụla nke na - eche nche ma ọ bụ kwenye na enwere nkata (yana o doro anya megide ha) ga - emecha nwee ike ịta Zwarte Piet maka ọdịda, nke mere na mkpọtụ ọ bụla dị egwu megide ijikọ ụwa ọnụ na klọọkụ ochie ochie esoro otu ahụ nke kpatara ọdachi akụ na ụba.
Yabụ na ọ bụrụ Jair Bolsonaro ekwuo na ọ bụ ndị NGO na-ahụ maka ịkụnye ọkụ Amazon, mgbe ahụ ị nwere ike ịhụ nke ahụ dịka echiche izu nzuzo. Etubere onyonyo nke uwa nile: n'okpuru Jair Bolsonaro, nkuume nke ụwa anyị na-anyụ anyụ oge.
Ọ bara uru ịnọgide na-ekwughachi na anyị enweghị echiche ọ bụla ma ozi anyị na-ahụ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị. Still na-echetakwa ndị gbara ọsọ ndụ na-asọfe ókè US na Mexico? Still ka na-echeta ntiwapụ oria Ebola? Anyị anaghị anụ ihe ọ bụla ọzọ gbasara ya ozugbo etinyere usoro ndị a ga-akwalite. Mgbe ahụ nsogbu ahụ ga-apụ n'anya na mberede dị ka snow na anyanwụ. N'oge ndị gbara ọsọ ndụ na-asọga ókè mba America, Egosiri m otu ị ga - esi mee ka igwe mmadụ dị ukwuu buru ibu na ngwanrọ; na onyonyo onyonyo. Adaysbọchị taa ị na-ahụkwu mgbasa ozi na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ dịka Facebook na-enye sọftụwia na-enweghị atụ iji mezie foto (lee voorbeeld). Ọ na-adịwanye mfe ijikwa ihe oyiyi na ụda. Anyị amataghị mgbe anyị nwere otu Ajụjụ ọnụ Bolsonaro ma ọ bụ onye a n'ezie ma ọ bụ na anyị ga-aga otu ihu gbanwee nọdụ na-ekiri. Eziokwu dị mfe na anyị kwenyere na ụzọ ndị isi mgbasa ozi bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ narị otu narị ma ọ bụ puku, yana onyinyo anyị nwere ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị dị mma dabara na ya, ọ pụtara na anyị nwere okwukwe n'ihe ekwere anyị.
A na-akpọ Amazon ahụ ọkụ? "Ehee, ị ka na-ahụ ihe onyonyo ahụ!?"Ọ nọgidere na-eju m anya na ọ ka bụ ihe na-agaghị ekwe omume ịkọwara ndị mmadụ na ihe oyiyi abụkwaghị ihe akaebe. Ihe onyonyo adighi ihe obula. Nanị ihe ngosi ị nwere mgbe ị na-ahụ ihe oyiyi bụ na ị na-elele enyo gị. See na-ahụ ihe onyonyo. Ọ bụ ya. Site na sọftụwia nke taa, enwere ike ịmepụta ma jikwaa ihe niile n'otu ntabi anya. Lelee vidio dị n'okpuru ebe a iji hụ otú ụzụ ọgụgụ isi mmadụ nke oge a (AI) nwere ike isi chịkwaa foto n'ime sekọnd. Otu usoro a n’azụ imepụta onyonyo vidiyo (lee ebe a). Anyị nzọ ị chere “Ee, ihe ahụ niile ga - adị, mana ekwenyere m na Amazon na - agba ọkụ". Know ma ihe kpatara ya? N'ihi na ị na-ahụ ya na mgbasa ozi mmekọrịta na akụkọ. Ya mere, ọ bụ ndị iwe gị na-ekpebisi ike na-ekpebikwa okwukwe gị ike mgbe ha na-atụ ụtụ obere ma nwee ọtụtụ ijeri ego n'ụlọ akụ ha; ndi otu obere umu akwukwo. Will ga-ewute ya na enwere obere ìgwè ndị bara ụba dị otú ahụ na-adọta akụ niile, mana ị na-eleghara eziokwu ahụ anya na ha nwere ọwa mgbasa ozi buru ibu na ịntanetị dịka ngwá ọrụ iji soro ha egwu.
isi mmalite: noticias.r7.com
Ọkụ na-ere Amazon? Anyị amaghị! "Ee, mana amaara m onye bi ebe ahụ na-akwado yaOle ebe ka onye ahu bi, o wee bia ebe a ma lee anya oku ma obu onye ahu anata ozi a? "Ee, mana na Brazil ha agaghị agha ụgha maka ụdị ihe ahụ? Ole ndị na-erite uru na nke ahụ? Ọ bụrụ na Bolsonaro ga-apụ, ndị mgbasa ozi nke Brazil agaghị emebi atụmatụ ahụ?", Could nwere ike ịrụ ụka. I gha echezọ nke ahụ, dịka na US na Donald Trump (onye e chere na ọ na-emegide ọgụ miri emi), ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bụ naanị ndị na - eme ihe nkiri ma na - eme ihe omume ha na mgbasa ozi na usoro mgbasa ozi ọzọ. Notgaghị a ifụ ike ma ọ bụrụ na ị bụghị otu ọnụ. Nke ahụ nwere ike ịkarị ọtụtụ, mana lelee edemede m mere n'oge na-adịbeghị anya banyere Ursula von der Leyen, onye isi ala EU ọhụrụ (lee ebe a) wee chọpụta ka esi arụ ọrụ.
Ndị mgbasa ozi nọ ebe a imere ndị mmadụ ihe ma kwado mbigba ọchịchị onye kwuo uche ya. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-egwu egwu na-enyocha ihe odide nke nna ukwu ma nwee iduzi ndị bi n'ụzọ ebumnuche, n'amaghị na a na-egwuri egwu oge niile site na ime, aghụghọ na aghụghọ.
Ihe ngosi "Amazon" a kwesiri ntughari uche banyere ndoro-ndoro ochichi na ndozi ya na akara aka nri. Tinyere ihe ndị ọzọ, enwere m nkọwa zuru ezu banyere usoro a na nkọwapụta nke ụghalaahịa n'aka nri isiokwu a nyere. Gụọ akụkọ ahụ ọzọ ma chọpụta otu esi egwu egwuregwu a.
Ebumnuche ahụ bụ Problem, Reaction, Solution kọwara
Mgbapu nke ịchịkwa 'rechts', Trump, na Brexit (na ihe niile ejikọrọ ya) amalitela
Esemokwu maka usoro ochichi onye kwuo uche (FvD) buru amụma
Tags: ụwa, igbo ohia, oku igbo, brand, agba, Jair Bolsonaro, ngụgụ, mazone, NGO
Anna de Winter dere, sị:
23 August 2019 na 10: 09
Ọ na-atọ ụtọ! Daalụ maka idepụta otú ọ ga-esi ... kpọmkwem ihe m chere mgbe m hụrụ na "ozi" a na mberede na-abịa ...
keazer dere, sị:
23 August 2019 na 10: 11
Vidio ahụ na-echetara m ọzọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iru ihe dị ka nke a n'ụwa a site na sketị ụmụaka dị mfe. Kedu ka o si dị mfe ịme ihe dị ka nke a n'èzí nke ụwa a ikwu maka welie aka?
DHBoom dere, sị:
23 August 2019 na 10: 59
Otu enyi m bi na Brazil, dịkwa na Sao Paulo ... echekwara m na m ga - achọ ịkọrọ gị akụkọ a, n'ihi na enwere okwu na mgbasa ozi gbara ọchịchịrị dị ka abalị n'ihi anwụrụ ọkụ n'ehihie. Onweghị ihe si ebe !! Eziterela m ya isi ihe mgbasa ozi ebe a na-ekwuwapụta ebe a na ọ naghị ekwu na nke a bụ eziokwu.
Kedu ka ọ ga - esi kwe omume na ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ihe nzuzu ... Onye ọ bụla na - eche echiche dị mfe maara na ihe dị ka nke nwere ajụjụ dị mfe nwere ike ịkọ ya dịka akụkọ ụgha site na ịjụ enyi nke bi ebe ahụ?!
Enwere m nnukwu obi abụọ m niile gbasara akụkọ, mana n'ihi akụkọ a, ha tụfuru kpamkpam .. Ihe arụ ...
23 August 2019 na 12: 49
Enweghị m ike ịchọpụta azịza gị (nke metụtara n'ozuzu ya), mana m na-eche na akụkọ gị bụ eziokwu, mgbe ahụ, a na-enwekarị ndị agha nke troll na-echere gị (ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ na-eche mkparịta ụka nke ndị na-elekọta mmadụ) iji kwupụta nke dị.
23 August 2019 na 13: 42
Oh ee ... ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọrọ obere akpa:
Enweghi ike ijikwa oke oke ohia nke oke ohia nke Amazon ma o ka na-abawanye kwa ubochi. Amazon bara ezigbo uru maka anụmanụ na ndị mmadụ, yana maka ịlụ ọgụ maka mgbanwe ihu igwe. Ọ bụ ya mere WWF ji amalite mkpọsa ihe mberede. Mana anyị siri ike, yabụ nyemaka! Ederede AMAZONE ka 4333 ugbu a ma nye onyinye 3 euro. You nwere ike izipu ozi ederede ka oge ịchọrọ! Chọrọ ịmatakwu? https://www.wwf.nl/kom-in-actie/noodactie-bosbranden
23 August 2019 na 13: 46
Oh ee na mgbe ị kwụsịrị ego maka Porsche ọhụrụ maka onye isi, a ga-emefu ego gị n'ụzọ bara uru. Eleghị anya enwere ụfọdụ osisi ọhụụ zubere na ogige anụmanụ Apeldoorn, mana n'ezie, a ga-azụrịrị ọtụtụ ihe mgbasa ozi TV na mgbasa ozi dị oke ọnụ na akwụkwọ akụkọ, nke mere na ọtụtụ ndị mmadụ na-esonye. Nke ahụ bụ n'ezie ihe kachasị mkpa.
23 August 2019 na 21: 20
Nweta ugwu agha
Ndị na-azụ ha n'oké osimiri
IHE gbakwunyere na mwepu kere ume na gburugburu ụwa dị ka ọtụtụ gbakwunyere & mwepu, Kraịst / mgbochi Christ, ihe ọma / ọjọọ, wdg.
Seasheprd enweghị ntutu ọzọ karịa ndị ọzọ, ndị mmadụ pụtara ihe dị mma bụ ndị ọrụ afọ ofufo mana onye isi ya na ụlọ ọrụ ndị ọbịa na-aga na tebụl
Onye isi ala Osama dere, sị:
24 August 2019 na 00: 25
NASA kwuru na ọkụ ọgbụgba dị ole na ole:
5.000 dị otu a kama 15.000 12 afọ gara aga.
Ya mere o doro anya na Bolsonaro ga-aga.
" A ga - enwe ndị isi na - agagharị na ikpe Jeffrey Epstein?
Gini bu eziokwu banyere mwakpo nke onwu n'ihi nwayi nke puru ime na Assen? »
Nleta ha: 4.152.328